होस् गर्नुस ! यी कुरा झुक्किएर पनि फेसबुकमा पोष्ट नगर्नुस, जेल जानु पर्ला ! - inaruwaonline.com
होस् गर्नुस ! यी कुरा झुक्किएर पनि फेसबुकमा पोष्ट नगर्नुस, जेल जानु पर्ला !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०७, २०७३ समय: १५:१२:०५
सामाजिक संजाल फेसबुकले विश्वभरिका मानिसलाई एकै ठाउमा गोलबन्द गरेको छ । मानिसहरुले सामाजिक फेसबुकमा मात्र नभई सामाजिक संजालमा भएका विभिन्न सुविधाहरुलाई सहि तवरबाट प्रयोग गरेको पाइदैन ।यसलाई भ्भिन्न तरिकाले धेरै मात्रामा दुरुपयोग गरेको प्रसस्त पाइन्छ । त्यसैले सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्न पाइयो भनेर पोष्ट गर्ने, कमेन्ट वा सन्देश पठाउने सबै सामाजिक संजाल करताहरु सजग हुन जरुरी छ ।
किनकि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता जति बढिरहेका छन् अपराध पनि त्यति नै बढ्दै गएकाले यसबारे विभिन्न कानुन बन्दै आएका छन् । त्यसैले नक्कली अकाण्ट बनाउने, भद्दा र अश्लिल कमेन्ट गर्ने, आपत्तिजनक पोष्ट गर्ने, अनलाइनबाटै मानिसहरुलाई धम्काउने वा सताउने गर्दै हुनुहुन्छ भने अब सजग हुनुहोला । त्यसैले आफ्नै एकाउन्ट हो भन्दै मनपरि गर्न थाल्नुभयो भने तपाइको भबिष्य नै खतरामा पर्न सक्छ ।
१. जोशमा होश नगुमाउनुस् :
२. नक्कली अकाण्टबाट बँच्नुस् :
अश्लिल सामग्रीबाट टाढै रहनुस् :
३. कमेन्ट गर्दा ध्यान दिनुस् :
४. पोष्ट गर्नु अघि सोंच्नुस् :